Saynisyahannada FSBI "VNIIKR" waxay soo saareen tilmaamo lagu ogaanayo laguna aqoonsanayo barta nepovirus giraan madow ee baradhada - Nidaamka Baradhada
Saynisyahannada Xarunta Karantiiniga Dhirta-Ruushka (FSBI "VNIIKR"), ee hoos timaadda Rosselkhoznadzor, ayaa dhammaystiray shaqadii horumarinta iyo hirgelinta talooyinka habraaca (MR) ee ku saabsan ogaanshaha iyo aqoonsiga baradhada madow ee loo yaqaan 'ringpotpot nepovirus'. Shaqada sayniska waxaa lagu fuliyay iyadoo la raacayo qodobada Heshiiska Caalamiga ee Dhirta Difaaca iyo Heerka Caalamiga ee Tallaabooyinka Jirka ee Lambar 27.
Xilligan, fayraska giraanta madow ee baradhada (PBRSV) ayaa lagu daray liisaska A1 ee walxaha karantiilka ah ee Xiriirka Ruushka, EAEU iyo EPPO.
Baradhadu (Solanum tuberosum) waa martigaliyaha ugu weyn ee fayraska baradhada madow ee baradhada.
Baradhadu (Solanum tuberosum) waa dalag qiimo badan oo si weyn looga beero dalkeenna. Xiriirka Ruushka, baradhada waxaa lagu beeray labada beerood ee badeecooyinka noocyada kala duwan ee lahaanshaha, iyo meel walba - aqallada shaqsiyadeed iyo xagaaga.
Maaddaama ay tahay cudur-sidaha 'intracellular pathogen', PBRSV waxay la qabsan kartaa dhammaan gobollada ay geedaha ay martida u tahay awood u leeyihiin inay koraan. Waa la ogyahay in PBRSV lagu soo bandhigi karo baradhada iniinyaha ee cudurka qaba.
Qiyaasta ugu muhiimsan ee looga hortagi karo faafitaanka PBRSV waa ogaanshaha hore ee iniinyaha baradhada iyo baradhada iyadoo la adeegsanayo habab cilmi baaris shaybaar oo casri ah, oo tilmaamahan loogu talagalay.
Intii lagu guda jiray diyaarinta talooyinka habka, saynisyahannada FGBI "VNIIKR" waxay cusbooneysiiyeen oo ay soo gudbiyeen macluumaad guud oo ku saabsan shayga karantiil - fayraska baradhada madow ee viruska (PBRSV): magac-bixinta, dhirta martida loo yahay, baahsanaanta, bayoolajiga (hababka wareejinta iyo qaybinta), waxyeellada iyo khibradda baaritaanka adduunka.
Iyada oo ku saleysan natiijooyinka daraasadaha, hab loogu talagalay ogaanshaha iyo aqoonsiga baradhada madow ee nepovirus ayaa la soo saaray, kaas oo bixiya baaritaanka baaritaanka enzyme immunoassay ama waqtiga dhabta ah PCR iyo tijaabooyinka xaqiijinta ee PCR caadiga ah.
Intii lagu guda jiray cilmi baarista, kormeerka cilmiyaysan ee dhulalka ayaa la sameeyay, taas oo ka dhalatay 315 tijaabo baradho ah. Kormeerka cilmiga ah waxaa lagu sameeyay muuqaal ahaan ku saleysan astaamaha uu sababo fayraska.
Dhammaan qaababka baaritaanka shaybaarka ayaa la ansaxiyay. Lama helin natiijooyin wanaagsan oo been ah.
Tilmaamahani waxay waafaqsan yihiin qawaaniinta shaybaarka waxaana loo adeegsan karaa ku dhaqanka saraakiisha iyo khabiiro ku shaqeeya beerka karantiilidda dhirta marka la aasaasayo xaaladda phytosanitary ee qalabka iyo / ama alaabada.
Tags: Xarunta Quarantine Plant-All ee RuushkaRosselkhoznadzorbar baradho giraan madow
Ruushku wuxuu horumarin doonaa xakamaynta sunta cayayaanka iyo agrokimikada
Dufcado baradho ah oo qaba cudurka loo yaqaan 'brown brown' ayaa ka yimid Shiinaha Shiinaha
Sanadkii 2020, Vladimir agrarians wuxuu dhoofiyay in ka badan 4,7 kun oo tan oo badeecooyinka dhirta ah
Beeraleydu waxay la kulmi karaan dhibaatooyin sababtoo ah xakamaynta xad dhaafka ah ee abuurka la soo dejiyo